Nepalistudio » ‘महाजोकर विद्यासुन्दर’को भारी घोषणा, यसरी भए असफल ‘महाजोकर विद्यासुन्दर’को भारी घोषणा, यसरी भए असफल – Nepalistudio
‘महाजोकर विद्यासुन्दर’को भारी घोषणा, यसरी भए असफल
महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यमाथि सुरु सुरुमा जति काठमाडौंबासीले आशावादी थिए आज त्यो अवस्था रहेन । स्थानीय नै उनीमाथि खनिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत ‘विद्या सुन्दरलाई वडा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने मेयर बनाएँछु’ भन्दै चुकचुक गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्य गत वैशाख २६ गते विजयी भए । विजयी भएलगत्तैको सम्बोधनका क्रममा सय दिनभित्र गर्ने १ सय १ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर, उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व समालेको १० महिना बितेको छ ।
उनका एक सय एक कार्यक्रम मध्येको २० प्रतिशत योजना पनि सफल भएको देखिदैन । शाक्यको आकर्षक र महत्वकांक्षी घोषणा सुनेर भोट दिई चुनाब जिताएका महानगरवासीहरु अहिले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । त्यस्तै उनलाई ‘जोकर’को उपनामका टोल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् । मिडियासम्म व्यापक आलोचना हुने गरेको छ ।
यस्ता थिए मेयर विद्यासुन्दरका मुख्य प्रतिवद्धता
१.मिनी असन बजार
शाक्यले चुनावताका जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीसहितको मिनी अशनबजारको परिकल्पना गरेका थिए । यो योजनामा उनी शतप्रतिशत असफल भएको देखिन्छ ।
२.सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
शाक्यको प्रतिवद्धता लिष्टमा देखिएको दोस्रो कार्यक्रम राज्यले दिँदै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा थप गरी पाँच हजार पु¥याउने थियो । तर, यहाँ संयोग के भईदियो भने उनले नबढाएर यसमा कांग्रेस सरकारले उमेर घटाएर ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धाभत्ता दिने बनाइदियो ।शाक्यको घोषणापत्रअनुसार वृद्धवृद्धालाई घरदैलोमा दक्ष चिकित्सकसहितको टोली पठाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम भने गरेका छन् । जसले एमालेले वृद्धवृद्धाका लागि सहयोग गर्ने राजनीतिक दल हो भन्ने आभाष फेरि एकपटक दिएको छ ।
३. ग्रीन एण्ड क्लिन काठमाडौं
‘ग्रीन एन्ड क्लिन काठमाडौँ’ अभियान तथा विद्युतीय सुशासन कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने विद्यासुन्दरको तेस्रो प्रतिवद्धता लिष्टमा समेटिएको छ । उनको यो योजनालाई नै अहिले सबैभन्दा बढी गुड जोक्सको संज्ञा मिलेको छ । उनी मेयर भएपछि नै काठमाडौं झन् झन् प्रदुषित बन्दै गर्इरहेकाे छ ।
४.घरघरमा ‘अचम्मको सियो र गज्जबको चुलो’
‘घरघरमा अचम्मको सियो र गज्जबको चुलो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि शाक्यको प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ । सुन्दा नै हाँसो उठ्ने यो प्रतिवद्धतामा मेयर शाक्य गज्जब तरिकाले उडेका देखिन्छन् ।
५.‘कौसीखेती तथा गार्डेनः घरघरमा जैविक तरकारी खेती’
मेयर शाक्यले ‘कौसीखेती तथा गार्डेनः घरघरमा जैविक तरकारी खेती’का लागि आवश्यक बाकस, मल, प्लास्टिक टनेलसहितको प्रविधिका लागि प्रोत्साहनस्वरुप अनुदानको व्यवस्था गर्ने, न्यून शुल्कमा बिरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी निर्माण गर्नेसमेत उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनी मेयर भएपछि यो योजना कार्यान्वायन हुन त परै जाओस्, तरकारी भाउ बढेर किनेर खानै नसकिने समय पनि निम्तिएको छ ।
६. फ्रि वाईफाई जोन
शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अवस्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्र, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल र पार्कहरुमा फ्रि वाइफाई क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने पनि बताएका थिए । यो निर्णय कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित त गरे ।तर कार्यपालिकाबाट पारित भए पनि हालसम्म महानगरको एक स्थानमा निःशुल्क वाइफाई जडान भएको छ त्यो हो नयाँ बानेश्वर । त्यहाँ वाईफाई जोन समेत लेखिएको बोर्ड टाँसिएको छ तर वाईफाई भने चल्ने गरेको छैन ।
यसरी असफल भए मेयर शाक्य
उनले स्मार्ट शहर निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिले स्मार्ट फोन बोक्नु पर्छ भन्दै मोबाइल सेट बाड्ने निर्णय नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गराएका थिए । जनताको करबाट उठाएको पैसाले मोबाइल किन्ने बिषयमा धेरै टिकाटिप्पणी पछि उनी उक्त निर्णयबाट हटे । निर्वाचित भएपछि आमसञ्चार माध्यमभन्दा धेरै टाढा बसे उनी । तर, केहीदिन अघि पहिलोपटक पत्रकारहरुलाई बोलाएर सुझाब लिए । जसमा आफूले चुनाबका बेला अति नै महत्वकांक्षी एजेण्डाहरु अघि सारेको स्वीकार गरे । यद्यपि आफू इमानदारीतापूर्वक ती एजेण्डा कर्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिवद्धता भने दोहोर्‍याए ।
अचम्मको कुरा त के थियो भने उनले एक सय दिनमा गर्छु भनेका १ सय १ काममध्ये आधाभन्दा बढी त एक सय दिनमा गर्न संभव नै थिएनन् । किनकि ती दीर्घकालीन् कार्यक्रमहरु थिए । र, अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग पनि छलफल गरेर गर्नुपर्ने कामहरु थिए । तर, उनैले प्रतिवद्धता गरेका आधाजति काम गर्नका लागि भने एक सय दिन नै पर्याप्त थियो । ती प्रतिवद्धतामा भने उनी पक्कै चुकेकै हुन् ।
२० वर्षपछि आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अबसर पाउँदा र जनप्रतिनिधिले आकर्षक नारा लगाउँदा जनताको मन जित्नु अस्वभाविक होइन । तर, जनतासामू कबूल गरिएका बाचाहरु पूरा गर्न नसक्नु चाहिँ अहिले शाक्यका लागि ठूलो ब्याक फायर भइरहेको छ । सामाजिक सञ्चालमा एमालेका केही कार्यकर्ता बाहेक सबै विद्यासुन्दरको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सामजिक सञ्चालमा पनि एक प्रकारको जनमत छँदै छ । मेयर भएपछि एक सय दिनमा शाक्यले महानगरको ६ वटा बैठक गरे । पहिलो बैठक कार्यभार सम्हालेका पहिलो दिन जेठ १७ गते बसेको थियो । त्यसपछि क्रमश असार ६, ९, २७, २९ गते र साउन ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । कार्यपालिकाको ६ वटा बैठकले २७ वटा निर्णय गर्यो । जसमध्ये पनि अधिकांस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
घोषणा गरेअनुसार १ सय १ काम गर्न नसकेपछि शाक्यले केही काम भने गरेका छन् । जसमध्ये कही जनताको पक्षमा छन् भने विवादित पनि छन् । शाक्यले चुनावी घोषणपत्रको पहिलो बुँदामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने उल्लेख गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता प्रथम बैंठकको पहिलो निर्णयबाट पारित गराए पनि । जसमा काठमाडौं महानगरपालिकाका ८० वर्ष उमेर पूरा भएका पुरुष र ७५ बर्ष उमेर पूरा भएका महिला बरिष्ठ जेष्ठ नागरिकहरुलाई महानगरपालिकाको तर्फबाट वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ महानगर भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्यो । र, भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदियो ।
महानगरपालिकाको घर–घर, टोल–टोलबाट उत्सर्जन हुने फोहोरलाई सूर्योदय अगावै विसजर्न र व्यवस्थापन गर्ने पनि उनले कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गर्यो । तर, कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । हप्ता दिनभन्दा बढी फोहोर उठ्न सकेको छैन । काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिरशाक्यले महानगरका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता पनि तोक्ने काम गरेका थिए । स्थानीय तहको नीति नियम प्रदेशसभाले निर्णय लिने भएकाले यो निर्णयबाट उनी पछि हट्नु परेको छ ।
यस्तै, उनले स्मार्ट शहर निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिले स्मार्ट फोन बोक्नु पर्छ भन्दै मोबाइल सेट बाड्ने निर्णय नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गराएका थिए । जनताको करबाट मोबाइल किन्ने बिषयमा धेरै टिकाटिप्पणी पछि उक्त निर्णयबाट हटे । एक बालिकाको मृत्यु र अर्की बालिका भेलमा बगाएको घटनासँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपत्यकाका खाल्डा पुर्न सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, शाक्यले बर्षातकाे समयमा खाल्डा पूर्न नसकिने बताएका थिए । उनको यो वक्तव्य सामाजिक संजालमा चर्चाको विषय भनेको थियो । यद्यपि शाक्यकै १ सय १ कार्यसूचीको २४ नम्बरमा सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, विशेष प्रविधिको प्रयोग गरी धुलो र खाडलरहित सडक निर्माण गर्ने उल्लेख थियो ।
महानगरले ७ करोड रुपैयाँ खर्चेर गाडी किन्ने कुरा पनि विवादमा तानिएको थियो ।त्यस्तै, महानगरले आर्थिक विधेयकमार्फत करको दर र दायरा दुबै बढायो । तर, कायम गरिएको नयाँ दरमा गंभीर प्रकृतिका त्रुटिहरु भेटिएपछि करको नयाँ दर लागू गर्न सकेनन् । शाक्यले महानगरभित्र उद्योग र व्यवसाय गर्न अझ महँगो बनाइदिए । व्यवसायमा कर बढाएपछि निजी क्षेत्रले सो कर तिर्न नसक्ने भन्दै सार्वजानिक रुपमै विरोध पनि गरे ।
समग्रमा विद्यासुन्दरका एक सय दिनलाई खासै उपलब्धीमूलक मान्न सक्ने अवस्था छैन । यसको अर्थ के हो भने उनले एक सय दिनमा १ सय १ काम गर्छु भनेर घोषणा नगरेका भए पनि अहिले उनको यतिधेरै आलोचना हुने थिएन । शाक्यकाे घोषणा र काम गराईलाई तुलना गर्दा विद्यासुन्दर उत्कृष्ट जोकरका रुपमा स्थापित भएका देखिन्छन् ।
फेरी थपे अर्काे घाेषणा
काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरलाई ‘हेल्दी सिटी’को रूपमा विकास गर्न धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त सहर घोषणा गरिएको जानकारी गराए।धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त सहर घोषणाबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न गएको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने अपेक्षा गरिएको छ। महानगरपालिकाले सूर्तिजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, विक्रीवितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण र नियमन गर्ने उद्देश्यले बुलुम्बर्ग फिलानट्रोपिजको सहयोगमा यो अभियान सुरू गरेको हो।मेयर शाक्यले मुटु रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, क्यान्सर, मधुमेहजस्ता प्राणघातक रोगबाट बचाउन पनि यस्ता अभियानमा संचालन गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे। तर उनकाे याेजना पनि जाेकमै सिमित बन्ने खालकाे देखिन्छ । उनकाे याे घाेषणासँगै फेरी नालायक मेयर भन्दै सामाजिक सञ्जाल तात्न थालेका छन् ।
काठमाडौं ‘धुम्रपानमुक्त सहर’ घोषणा भएकाे खबर सार्वजनिक भएपछि प्राप्त केही प्रतिक्रियाहरु:
११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार प्रकाशित